Ihe na 10 / 12 / 2019 by Dr. Patrick Young dere na gallery.
Nke a ga - abụ nyocha nke ukwu maka ebumnuche banyere ihe ọmụma n'ozuzu ya, abụghị nke a ga - esi eduzi. Nke a apụtaghị na m na-anabata ojiji ya ma ọ bụ nnabata.
Ọtụtụ mgbe, ghọtahiere ma ọ bụ ghọtahie ya- enwere ụdị steroid dị iche iche. Corticosteroids, nke nwere mmetụta ọjọọ karịa karịa Anabolic Steroid, n'ihi ụfọdụ ihe mgbasa ozi na-eme ka mmụọ ọjọọ jiri ya na ojiji a na-anabata ya n'ezie n'ọtụtụ oge- gụnyere egwuregwu ndị ọkachamara na egwuregwu. Ha na-ejikarị ọgụ ọgụ mbuze. Enwerekwa Progesterone nke a na-eji ọtụtụ ụdị mgbochi afọ na nke ọtụtụ nde ndị nwanyị na-ewere kwa ụbọchị. Anabolic steroid (nke akpọrọ aha AS ma ọ bụ AS) bụ ihe ọtụtụ mmadụ na-eche banyere mgbe mbụ ha nụrụ “steroid” na ihe ọjọọ niile metụtara ha.
A) Atetọ ọnwụnwa - mgbe ị na - etinyekwu ego nke ya testosterone HPTA nke ahụ gị na - amalite imechi (akwụsị imepụta Testosterone n'ihi na ahụ gị na-adị nke ọma karịa ezuru); Na nkenke nke a na - eme ka bọọlụ gị gbarie. Ọtụtụ mgbe anaghị ahụkarị ya. Eleghi anya mbelata 25%, 50% kacha. Ozugbo ị kwụsịrị okirikiri, gbaa PCT (Post-cypering therapy) ha na-alaghachi nha zuru oke. Ọ bụghị nke na-adịgide adịgide. Peoplefọdụ ndị mmadụ na-agba HCG (Human chorionic-gonadatropin) ka ha nọ na okirikiri ka edobe bọọlụ ha n'ọtụtụ ma ọ na - enyere aka na mgbake n'ihi na ọ na - eme ka mkpụrụ ndụ leydig gị na - arụ ọrụ.
B) Isi nkwọcha / ntutu isi: AS anaghị akpata isi nkwọcha. Agbanyeghị, ọ nwere ike mee ka usoro a dị ngwa. Ọ bụrụ na ntutu isi na-agba n'ime ezinụlọ gị, ihe ijuanya na ọ ga-abụrịrị onye ga-eme ka usoro a dị ngwa. Bill Roberts dere banyere ụdị Steroid abụọ dị iche iche- Idị nke I na IIdị nke Abụọ; Idị m ịbụ ogige ndị kachasị dị ka Testosterone, Tren, Decca, Sust, wdg na anddị II dị ka Winstrol (stanazolol), dbol, anavar, Masteron wdg. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ata ụta ọgwụ ọjọọ dịka Winstrol na Masteron Enanthate (Drostanolone) Dika onye mere oria ntutu ma nwaa izo ogwu ndi ahu ma enwee nsogbu banyere MPB, mgbe nke ahu abughi nke ozo, enwerem isi ututu nke MPB (isi ngbocha) karie udiri ogwu ndi ozo. O doro anya na ọgwụ ndị DHT na-eme (dị ka deca) ga-adị gị mma n'isi. Naanị otu ụzọ ị ga - esi buso nke a bụ iwere Finasteride (propecia / proscar) ụfọdụ ụdị ncha ntutu ụdị shampoos na di na nwunye.
C) Oria akpukpo aru- ụfọdụ mmadu ghapuru n’ihu ha; ụfọdụ mmadụ na-apụta na obi ha ma ọ bụ na azụ… akpụkpọ ụfọdụ mmadụ na-apụkwa n'anya. Ọzọ, onye ọ bụla na-emetụta iche iche.
D) Ọ dị m ka ekwesịrị ikpuchi nke a n'okpuru testicular atrophy ma echefuru m echefu. Ọtụtụ oge m na-anụ ka ndị mmadụ na-ekwu maka AS na-eme dick gị, mgbe ha pụtara bọọlụ gị n'eziokwu. Yabụ, iji mee ka nkọwa, dick gị ghara ịda mbà na nke ahụ na -echekwa echiche gị oke dị ka ịsị ntụtụ ịgba imi na-agba gị imi. Y’oburu, n’enwekwu ọbara na-ebe ahụ, a ga m asị na ị ga-akpachapụkarị anya na-eme ihe na-eme. Ọzọ, ọ dabere na kọlọm nke ị na - ewere ọgwụ ụfọdụ dịka Deca na Tren nwere ike ịkpa oke ike na libido gị (yabụ nkebi ahịrịokwu, “deca-dick”) na ụfọdụ ụmụ nwoke họọrọ ka ha Tadalafil (Cialis) (171596-29-5) ma ọ bụ viagra (ịkwesighi) mana ọgwụ ndị ọzọ dị ka nnwale kwụ ọtọ (ụdị ọ bụla) ma ọ bụ dbol ga-eme ka ị na-arị elu na mgbidi dị nnọọ ka… .. Ọtụtụ ụmụ agbọghọ nwere di ma ọ bụ enyi nwoke nọ na okirikiri yiri ka ha na-enwe obi ụtọ na nwoke ha nọ na okirikiri, lol.
E) “Ọnụma” - Ọ dịghị ihe dị otu a. Ọ dị mfe dịka. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-ejighị n’aka, ee, ha ga-eme ka ị kwụsie ike karịa. Ma ọzọkwa, ọtụtụ ihe ndị ọzọ na ọgwụ nwere ike bute oke nke ahụ. Ọ bụrụ n’anyị na-ejigide mmụọ ma ọ bụdị na-arịa ọrịa uche, atụleela ị steụ steroid. Asi m n’obi na a ga-ekwu ụdị mmanya ahụ. Nke a anaghị emetụta ọtụtụ ndị mmadụ. Ọ na-adị ọtụtụ ndị ka hà nọ n'ọnọdụ dị mma ma ọ bụ na ha enweghị ihe ọ bụla. Enwere m ike ịhụ ndị mmadụ nwere ike ịkpa ọchị n'ihi na ha pere mpe ma sie ike karịa, ma ewezuga nke ahụ, ihe ọ bụla na-akọ banyere “oke iwe” (ụlọ ọrụ gọọmentị ma ọ bụ na ọ bụghị) bụ anụ.
Steroids anaghị eme ka ndị mmadụ nwụọ ma ọ bụ bute ọnwụ ha n'ihi ụfọdụ mmeghachi omume ọjọọ. Enwebeghị ọmụmụ sayensị nke na-egosi njikọ kpọmkwem na steroid anabolic na ọnwụ. Ndị mmadụ ga-arụtụ aka na Zyzz, mana ha agaghị atụaka akụkọ gbasara ezinụlọ nke ọrịa obi / ọnọdụ m na echeghị na emere mgbe ọ bụla ọha autopsy ga-ekwupụta? Iji kwupụta ọnụọgụ CDC site na 2005 site na Nnukwu Ike Arụ Ọrụ:
na ọnwụ site na anabolic steroids ……: 3
Ee, ọ bụrụ na emeere steroid ụzọ adịghị mma ọ nwere ike ịdị njọ. Steroid onral (dị ka dbol, winstrol, anavar, wdg) bụ ọrịa ịba ọcha n'anya ma nwee ike ịkpa ike na imeju gị ma ọ bụrụ na a inụọ ya oke oke ọgwụ were ogologo oge… ma ọ bụrụ na ị na-aingụ mmanya mgbe ị nọ na okirikiri. Ọ bụ nke a mere eji atụ aro ka emee ogwe ọbara tupu, n’oge, na mgbe a na-emegharị okirikiri. Inweta ihe dị ka ogwu nke mmiri ara ehi pụrụ inye aka belata imeju gị.
Ọbara ọbara nwere ike ịrị elu, ọ ga - agbadata, wee dabere na kọlọm ndị ị na - ewe Methandrostenolone (Dianabol) ntụ ntụ na EQ). Iwere osikapa yist na-acha ọbara ọbara nwere ike inye aka debe cholesterol na BP. Ọ bụ ihe dị mkpa ilebara anya. Ọ bụchaghị ihe kpatara ị ga-eji na-eri nri CLEAN mgbe ị nọ na okirikiri - ịghara iri pizza, burgers na friji.
Steroid na-ewere intramuscularly- ọ bụghị n’agha. Onweghi ihe kechiri onu ogwe aka gi ma obu ihe obula. Ọ bụrụ n’ị banye na akwara ma ọ bụ irighiri akwara ị nwere ike ịnwụ. Enwere ụfọdụ ebe ịgba ntụtụ - ọnụnọ nchebe kachasị mma, quads, glute, na saịtị ventro-gluteal. Ndị mmadụ na-echekarị na ịnyịnya ibu / glutes bụ saịtị kachasị mma, m ga-ekwenye ebe ọ bụ na o siri ike iru yana n'ihi akwara sciatic na-agba ọsọ n'akụkụ ahụ ma ọ bụrụ na ị kụrụ ya, jisie ike na ndụ gị fọdụrụnụ.
Steroids abụghị ọgwụ ọrụ ebube. Nwere ike ịnọdụ ala n'ihe ndina ma rie mkpụrụ osisi nduku ma buru ibu, ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe ị ga - eme mgbe ị na - ewere ha, ị gaghi-emebisi ego gị n'iyi. Still ka kwesịrị ịrụ ọrụ ahụ. A ka ga-eri ihe dị ọcha. M ga-asịdị ọcha. Ghara idobe ihe niile.
Homonụ pro abụghị ihe nchekwa ọzọ maka steroid ebe ị nwere ike ịzụta ha na GNC / Nutrition zuru oke / ebe ọ bụla. Ha dị ỌZỌ dị ize ndụ, ọtụtụ mgbe, ị nweghị ike ịzụta ezigbo ọgwụ PCT ebe ahụ, ị ​​banyezie n'okporo ụzọ, n'ezie ụzọ siri ike iji gbakee ma ọ bụrụ na ị gbakee ma ọlị. Ọtụtụ ụmụaka ejedebela na TRT maka ndụ ha niile n'ihi nke a. Aghọtaghị m etu esi enwebeghị ikpe gbasara ikpe gbasara ụlọ ahịa ndị a.
MK-677 (Ibutamoren) na-arụ ọrụ nke ọma Maka Buildinglọ Arụ Ọrụ? Nyocha Sarm [2019 NEW]	Ntuziaka Zuru Oke 2019 Maka SARM SR9009 Isi